Fokontany ao Antanimalandy, Kaominina ambonivohitr’i Mahajanga. Tsy asian’ny olona hajany intsony ny fasana ao Mangatokana kanefa dia mirakitra tanteraka ny vakoka tsy tontan’ny ela ho an’ny taranaka fara aman-dimby. 30 septembre 2020
Miantso vonjy amin’ny Minisiteran’ny serasera sy ny Kolontsaina ny lehiben’ny
Very hasina tanteraka ireo razana milevina ao amin’ny fasana ao Mangatokana, anatin’ny Fokontany Antanimalandy ao Mahajanga. Nambaran’ny lehiben’ny Fokontany ao an-toerana fa misy olona sahy manorina trano eo ambonin’ny fasana, izay sokajian’izy ireo fa fanimbazimbana tanteraka ary tsy firaharahana an’io fasana anisany manan-tantara io. Efa nisy hatrany ny fandraisan’ andraikitra nataon’izy ireo tamin’ny fanesorana an’ireo olona ireo, nisy fotoana aza nambarany fa noravana mihitsy ireo trano naorina tsy ara-dalàna ireo kanefa aty aoriana dia miverina manorim-ponenana tsikelikely eo ihany ireo andian’ olona ireo.
Miriaria eran’ny tanàna sahady ireo lehilahy nahavanon-doza FANAFIHANA MPIVADY TANY BETSIAKA -AMBILOBE (344) 22 octobre 2020 Olona 04 naratra, vola 2 tapitrisa ariary lasan’ireo jiolahy miisa enina AMBILOBE (115) 21 octobre 2020 Tovolahy nisandoka ho mpitandro filaminana sarona ny alarobia teo ANKAZOMANGA (102) 22 octobre 2020 Sarona ireo 12 lahy mpampihorohoro sy mpanao fanafihana IMERINTSIATOSIKA (92) 21 octobre 2020 Nahanjahanjan’ny vahoaka irery ireo parlemantera mpanohitra AMBATONDRAZAKA (80) 26 octobre 2020 Lehilahy tompona “Agence de voyage” nadoboka am-ponja FIVADIHAM-PITOKISANA (64) 22 octobre 2020